USIZI PHEZU KOLUNYE KOSWELE UMAZISI NEZITIFIKETI ZABANTWANA – Sivubela intuthuko Newspaper
UNokuphila Sikhakhane onenkinga kamazisi ekanye nabantwana bakhe nomama wakhe
OWESIFAZANE waseBucanana kuWard 33 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal uNokuphila Sikhakhane (24) uthi akasazi ukuthi kumele aze enzenjani njengoba ebhekene nenkinga yokungawutholi umazisi (ID) kulandela ukuya emahhovisi azasekhaya watshelwa ukuthi akasekho emhlabeni.
Lentokazi enabantwana abane abangenazo izitifiketi ithi impilo inzima kakhulu njengoba kumele yondle nabantwana.”Impilo inzima kakhulu njengoba ngingenawo umazisi, ngaya emahhovisi azasekhaya bangitshela ukuthi sengashona. Lokhu kungiphatha Kabi kakhulu ngoba impilo Yami imile manje,”.
“Angikwazi nokuthi ngitholele abantwana bami izitifiketi ukuze bakwazi ukuthola imali yesibonelelo sikahulumeni. Kunzima kakhulu njengoba ngithembele kumama naye ohola imali yesibonelelo,” kusho Sikhakhane.
Unina wentombazane uJosti Sikhakhane uthi wonke umthwalo wokondla lezingane usemahlombe akhe.”Ngihola imali yesibonelelo sikahulumeni akekho osebenzayo kuleli khaya, ngibhekwe ukuthi ngibondle labantwana bandodakazi ngayo. Le mali engekho njengoba kumele sithenge ukudla kuyo futhi nokwenza kubenzima kakhulu,” kusho ugogo wabantwana.
Ikhansela lakulendawo kuWard 33 uZakheleni Xulu exoxa nephephanda iSivubela intuthuko uveze ukuthi uzolusukumela udaba lwalentokazi.
“Bengingenalo ulwazi lokuthi kunomuntu onenkinga yalolu hlobo, ngizokhuluma nomphathi wehhovisi lezasekhaya ukuthi uzosizakala kanjani. Kuyadabukisa ukuthi kubekhona umuntu onalenkinga kugcine sekulamba abantwana abane bonke,” kusho Xulu.
Lo mndeni uveze ukuthi usuhlalele ethembeni lokuthi nawo uzohlomula kuhlelo lukahulumeni lwamaphasela okudla ngalesikhathi sikathaqa (lockdown) yokulwisana negciwane iCoronavirus.
Umphathi kwihhovisi lezasekhaya eMpangeni uVusi Mjadu uveze ukuthi Lona wesifazane akumele ahlale phansi enenkinya kodwa akanikele emaphoyiseni ukuyovula icala bese eza nalo Kubo. “Udaba olubucayi lolu akumele ahlale ekhaya udadewethu akaye emaphoyiseni ukuyovula icala ukuze sikwazi ukumsiza,” kusho Mjadu.